काठमाडौं – स्पेनमा एउटा साँढेले एक व्यक्तिलाई सिंगले हानेर भित्तोमा पछारेको छ ।
रातो गेटबाट दौडिँदै आएका दुई साँढे देखेर ती व्यक्ति भाग्छन् अनि अलमलमा परेर एउटा रुखनजिक पुग्छन् । साँढेले उनलाई देख्छ अनि हान्निँदै आएर हिर्काउँछ । सिंगमा उठाइएका व्यक्तिलाई साँढेले भित्तोमा पछार्छ । दर्शकहरू चिच्याउँछन् ।
साँढेले त्यसपछि सिंग उज्याएर उक्त व्यक्तिलाई हिर्काउन खोज्छ । अनि अरू मानिसहरूले चिच्याएर साँढेको ध्यान मोड्छन् ।
साँढेको ध्यान भंग भएपछि उक्त व्यक्ति उठ्छ र उसलाई अरू मानिसले उठाएर लग्छन् ।
साँढेको सिंडले उक्त व्यक्तिको नितम्बलाई एक इन्चले मात्र नछोएको देखिन्छ ।
स्पेनको तफाला शहरमा साँढे दौडाउने समारोह आयोजना गरिन्छन् । घटनाको भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ ।
महिलाले जस्तो हाइ हील लगाएर हिंड्छन् यी पुरुष, कारण यस्तो छ
कहाँ छ समुन्द्र मन्थन बेला निस्किएको अमृत कलश ?
बिश्वको एउटा यस्तो देश, जहाँका रेलको जिम्मेवारी बच्चाले लिन्छन्
निरन्तर घट्दै सुनको मूल्य, कति पुग्यो ? काठमाडौं – पछिल्लो एक सातादेखि निरन्तर ओरालो लाग्दै आएको सुनको मूल्यमा आज पनि गिरावट आएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला र तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोल...